बिहे गरिसकेपछि थाहा भयो, श्रीमती त यस्तो पो रहिछन् ! - jagritikhabar.com
बिहे गरिसकेपछि थाहा भयो, श्रीमती त यस्तो पो रहिछन् !
एक व्यक्तिको एकै नजरमा एक युवतीसँग माया बस्यो । उनहिरुको सम्बन्ध मित्रता, प्रेम हुँदै विवाहमा परिणत भयो । ती व्यक्ति त्यतिबेला झस्किए जब उनलाई थाहा भयो कि जुन युवतीसँग उनले बिहे गरेका थिए ती युवती त चर्चित पो र्नस्टार थिइन्।